Uluhlu lweMac, iMacBook kunye neMacBook Pro luhlaziyiwe | Ndisuka mac
Uluhlu lweMac, iMacBook kunye neMacBook Pro luhlaziyiwe
Imfihlo evulekileyo izalisekisiwe. Uninzi lweWWDC kamva, iApple yazisa ngeHardware. Okwangoku Sinezixhobo zokuhlaziya iMac kunye noluhlu oluphathwayo, Ukuqala ngeMacBook, ukuya kuthi ga kwiMacBook Pro.Ukongeza, uApple ucebisa ukuba la maqela azakufumaneka ukuthunyelwa kwangoko. Masibone ukuba abafana baseCupertino basilungiselele ntoni.
U-Apple uhlala efuna ukuba neqela lokuqala, kwaye kwakhona liyangqina ngokubonisa yonke iMac ukusuka kwi- $ 1000. Siza kubona kwiiyure ezimbalwa ezizayo ixabiso esinalo ngeYurophu, kodwa akufuneki sifumane umahluko omkhulu. Kodwa kuthekani ngezixhobo eziphakathi? Kulungile sifumene Isikrini esiphuculweyo, iiprosesa ezikhawulezayo, kunye nenkumbulo ekhawulezayo ye-ultra, iThunderBolt 3 kunye nemizobo yesizukulwana esilandelayo. Singafikelela kwi-4k iMac ukusuka kwi- $ 1.299, isaphulelo njengophehlelelo kunye nemodeli ye-5k yeyona nto ifunwa kakhulu kwi- $ 1.799.
Ukwazisa uluhlu lweelaptops, ze-nostalgic, asinakho ukuvuselelwa kweMacbook Air. Kodwa oku akumele kusiphoxa kuba Ukuqala kweMac yiMacBook I $ 1.299, ukugcina ixabiso kuluhlu lonke: 1,499 ye-13 "MacBook Pro ngaphandle kweTouch Bar kunye ne- $ 1.799 kunye ne- $ 2.399 kuluhlu olune-13" kunye ne-15 "yeTouch Bar ngokwahlukeneyo.
Silinde ukwazi ngokweenkcukacha ezithile kwezi zixhobo zintsha, ukuba sazi ngokunzulu yonke into ekufuneka isizisele yona kwezi zintsha ii-2017 Macs.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » Uluhlu lweMac, iMacBook kunye neMacBook Pro luhlaziyiwe
Ukuphuculwa kweSafari, isikhangeli esikhawulezayo nesikhuselekileyo